Hisy soa aman-tsara ireo fanadinana ara-panjakana samihafa ary tsy hisy ny fanovana tetiandro hanatanterahana izany. Hitarina, araka izany, ny fetr’andro amin` ny fisoratana anarana. Hisy fampianarana manokana ho tanterahan` ny CRAN (Cours de Remise A Niveau) hoy hatrany ny minisitra. Ho amin` ny fampianarana amin` ny ankapobeny dia hisy fandaharana manokana amin` ny haino aman-jerim-panjakana manomboka anio. Hanampy betsaka ny zaza Malagasy hiatrika fanadinana ireo fandaharana manokana ireo, hoy ihany izy. Ankoatra izay, dia azon` ireo mpianatra alaina amin` ny alalan` ny aterineto eo amin` ny tranokalan` ny ministera ireo fandaharana. Efa mivonona amin` ny fanampiana samihafa ihany koa ny minsteran` ny fanabeazam-pirenena mba ahafahana manampy ireo mpianatra sy manohana ireo ray amn-dreny amin` izao fiatrehana krizy ara-pahasalamana sy ara-tsosialy izao. Hisy fanazarana sy enti-mody ho zaraina eny anivon` ireo CISCO manerana ny nosy ato ho ato. Miantso ireo mpanabe rehetra ny minisitra Rijasoa Andriamanana Josoa mba hiantoka ny kalitaom-pampianarana mandritra sy aorian` ny fihibohana. Nanamafy hatrany izy fa ho jerena manokana ihany koa ny momba ireo mpampianatra FRAM sy ny mpampianatra “vacataire” any amin’ny tsy miankina.